Ihe Ọjọọ 5 Na - egbu Ọnwụ nke Nchịkwa Ngwaahịa | Martech Zone
Anọ m na-arụ ọrụ ehihie na abalị maka izu ole na ole gara aga. Ọ na-agwụ ike, ọkachasị ebe m nwere ọtụtụ ọrụ m rụgidere ịrụ ọrụ na ya. Ike gwụrụ m… n’otu abalị n’izu a, m lọtara wee dinara ụra ma teta mgbe awa iri na abụọ gachara. O doro m anya na ejide m oyi ma ahụ m jụrụ ya n'ihi na enweghị m oge izu. Okwu ọrụ ahụ esiteghi na mgbagwoju anya ma ọlị, anyị etinyeghị uche na ndị ahịa anyị.
O yiri ka ọ bụ azịza dị mfe, mana gịnị kpatara ndị mmadụ ji eleghara ya anya oge niile? Echere m na e nwere ọtụtụ ihe:
Don't naghị elebara ndị mmadụ anya, ị na-a attentiona ntị n’oké olu. Nke a nwere ike imetụta mkpebi gị iji tinye mgbanwe na-agbasa sara mbara nke na-adịghị mkpa ma ọ bụ nke ndị mmadụ rịọrọ. Ihe egwu dị na ebe a bụ na ị kwuo, “M gere onye ahịa ntị”. Nsogbu bụ na ị geghị ndị ahịa ntịS.
I kwenyere, n'eziokwu niile, na ị na-eme atụmatụ dị mma maka onye ahịa. Ebumnuche gị dị mma. Esịt fo ama odu ke nnennen itie. Nsogbu bụ na ị naghị enyocha ha na mbụ. Eziokwu bu na will gha mgbe kpam kpam ịghọta ihe ndị ahịa na-eji ngwaahịa gị eme - ọkachasị ka isi gị na-eto n'ike n'ike.
I chere na ị ma ihe karịa. Maka ebumnuche ụfọdụ, ịnakwere ọnọdụ gị dị ka ikike nke ikike gị na mpaghara enyere. Yabụ ị chere na ịmara ihe onye ahịa chọrọ na ihe ọ chọrọ.
Don't naghị elekwasị anya na nsogbu ahụ, ị ​​na-elekwasị anya ụfọdụ azịza n’enweghị nkọwa zuru ezu ihe nsogbu ahụ bụ. Ma ọ bụ, ị hapụ saịtị nke nsogbu ka ị na-aga n'ihu ịgbasa ngwọta.
Don't naghị alụ ọgụ maka ndị ahịa gị. Na-ekwe ka ihe ngwọta na-wuru na ike dabeere na a mkpokọta nke incredibly nkà nkà mmepe na ọkachamara. Ha na-agbanwe mkpebi gị… na ihe ha na-atụ aro nwere ike ịbụ ihe ezi uche dị na ya. Nsogbu bụ na ọ na-eme ka uche dị n'ime, ma ọ bụghị ndị ahịa.
Ọzọkwa, ndị a na-egosi na ha dị mfe nghọtahie izere. Agbanyeghị, kwa ụbọchị, ụlọ ọrụ nwere nnukwu ndị ọrụ yana ihe ngwọta dị egwu kwa ụbọchị, ọ dị mfe ịhapụ saịtị nke ndị ahịa. Ọ bụrụ na ịmee, ihe mgbu ga-adị ngwa ma bụrụ ezigbo iru ala.
Ọkt 22, 2006 na 2:05 PM
Ezigbo post Doug - ị chịkọtara nke a mara mma.
# 1 bụ ihe siworo m ike ịlụ ọgụ. Karịsịa na ngwa m dị ka FormSpring na Ponyfish, ebe m nwere ọtụtụ ndị ahịa dị iche iche bụ ndị ji nwayọ hụ ụzọ otu atụmatụ si arụ ọrụ, mana onye ọrụ na-ada ụda nke ukwuu kwenyesiri m ike ịgbanwe ya.
N'ezie, m na-ahụkwa nke a ugboro ugboro na mmepe mmepe omenala ebe onye njikwa bụ nnukwu olu chọrọ X ka ọ bụrụ Y, mana ndị ọrụ "ezigbo" ndị na-arụ ọrụ maka njikwa ahụ na-achọsi ike iti mkpu na esemokwu.